Ungazazi njani iintsuku ezicatshuliweyo? Khangela ukuba usebenze iminyaka emingaphi | Ezezimali
USusana Maria Urbano Mateos | | Ngqesho, Izicwangciso zepenshini
Ukuze wazi i iminyaka yemirhumo kukhuseleko lwentlalo, into ebalulekileyo kukwazi ukuba yintoni isicatshulwa kunye nendlela ehamba ngayo kumntu ngamnye ngokukodwa. Ngaphambi kokuba uqale wazi ukuba yintoni ipenshoni enegalelo ukuba kufanelekile ukuchukumisa umntu ngamnye, kuya kufuneka uyazi ukuba ubuncinci ukuze ube nakho ukufaka igalelo kuloo pension yiminyaka eli-15; Oko kukuthi, umntu kufuneka ukuba ubuncinci Iminyaka eli-15 yobomi bakhe enegalelo elibonakalayo kukhuseleko lwentlalo.
Kuya kufuneka ubuncinci ube neminyaka emibini kule minyaka ili-15 idlulileyo unikele ngayo kwiminyaka engaphambi kwexesha lika cela umhlala-phantsi. Kuya kufuneka sithathele ingqalelo ipesenti ye- isiseko solawulo esinayo kuxhomekeke kunyaka esikuwo. Oku kusekwe kwinani leminyaka yemirhumo.
Kude kube ngu-2019, elona nani lincinci leminyaka Umntu ekufuneka ebaliwe yiminyaka engama-35 neenyanga ezintandathu
Kwi-2020 kude kube ngu-2022 kuqikelelwa ukuba inani leminyaka yemirhumo iya kuba ngama-36
Kwiminyaka engama-2023 kude kube ngowama-2026, inani leminyaka yiminyaka engama-36 kunye neenyanga ezi-6
Ngo-2027, inani leminyaka liyakuba ngama-37 eminyaka
Ngamanye amagama, njengokuba iminyaka ihamba, inani leminyaka yemirhumo ukuze ufumane i-100% yomhlala-phantsi iya kuqhubeka nokukhula.
1 Zingaphi iintsuku ezicatshuliweyo esinazo?
2 Ungazazi njani iintsuku ezinegalelo kuKhuseleko lweNtlalo
2.1 Iingcebiso ngokucela iminyaka ziye zanegalelo kuKhuseleko lweNtlalo
3 Ukongeza kwiminyaka yegalelo, kubalulekile ukwazi enye idatha
4 Kwimeko apho nayiphi na idatha ingachanekanga, kufuneka ndenze ntoni?
5 Uyazi njani imihla ecatshulweyo ukucela izibonelelo
6 Ngaba ikhona imisebenzi engadweliswanga?
7 Ukubaluleka kwengxelo yobomi emsebenzini
8 Ndibufunda njani ubomi bam bomsebenzi ukuze ndizazi iintsuku ezicatshuliweyo
Zingaphi iintsuku ezicatshuliweyo esinazo?
Ewe, kwiminyaka embalwa eyadlulayo i-BBVA yenze uvavanyo apho icandelo elikhulu labemi labuzwa ukuba babenolwazi ngenene kangakanani kuluhlu kwezokhuseleko loluntu kwaye ibiyimalini intlawulo abaza kuyibiza kwimeko ye cela umhlala-phantsi.
Uninzi lwabantu luthi bayazi ngokuchanekileyo ukuba leliphi inani leminyaka ababeludwelisileNangona kunjalo, xa kufikwa ekwazini ukuba baya kuhlawulisa nini, phantse akukho mntu waziyo ukuba angaphendula njani ukuba iyakuba yintoni imali leyo. Ukongeza koku, bekukho inani elikhulu labantu ababenegalelo elingaphantsi kweminyaka eli-15; naxa ubudala babantu babungaphezulu kweminyaka engama-41.
Ungazazi njani iintsuku ezinegalelo kuKhuseleko lweNtlalo
Yazi iintsuku esizicaphuleyo Kubalulekile ukwazi ukuba yimalini ekufuneka siyenze, kufuneka kuthathelwe ingqalelo oko ukhuseleko lwentlalo luthumela inyanga nenyanga Yonke idatha ehlaziywa njengephulo lokunceda abasebenzi.
Ukongeza kolu khetho, unamandla ngakumbi ngenisa isicelo nge-intanethi, Ungasithumela njani isicelo kukhuseleko lwentlalo ngeqonga. Ukwenza oku, kuya kufuneka ngena eqongeni kwaye ubuze ingxelo yakho yobomi emsebenzini apho iminyaka idwelisiweyo iya kuvela.
Kuya kufuneka ubeke eyakho ulwazi lomntu njengegama lakho nefani kunye nenombolo yobulungu bakho, kunye ne-imeyile kunye nenombolo yesazisi.
Apha ngezantsi, kuya kufuneka ubeke yonke idatha enxulumene nedilesi yakho kwaye emva koko, kuya kufuneka ucofe ukwamkela.
Ngelo xesha, idatha iya kuthunyelwa ukuze ukwazi ukucela ubomi bakho bomsebenzi.
Iingcebiso ngokucela iminyaka ziye zanegalelo kuKhuseleko lweNtlalo
Kuya kufuneka ugcwalise onke amasimi abhalwe i-asterisk, njengoko kufuneka njalo.
Kwimeko apho iyindlela kawonke-wonke kwaye awunayo, kufuneka ubeke u-0
Kuya kufuneka ubeke yonke idatha ngaphakathi kwesicelo ngaphandle koluvo. Ayinamsebenzi into yokuba unopelo olugwenxa
Kulo Uhlobo lwe-IDInombolo yesazisi kufuneka ibandakanywe kunye noonobumba; Nangona kunjalo, akuyomfuneko ukubandakanya amaqhekeza okanye izithuba xa uyibeka.
Inketho yesibini kukuyicela ngenombolo yefowuni oya kuyifumana kwiphepha lokhuseleko: 901 106570. Ngokucela ingxelo apha, iya kufika ngqo ekhayeni lakho ngohlobo lweleta.
Ukuba unesatifikethi sedigital, unokuzikhuphelela kwi-Intanethi ngePDF. Olu khuphelo lunokwenziwa kwangoko kwaye kuphela lulwazi oluthile ekufuneka luzaliswe.
Okokugqibela, inokwenziwa ukukhuphela idatha kwi-intanethi emva kokhuseleko loluntu lusinika ukufikelela kwidatha yethu ngegama eligqithisiweyo kwiSMS. Olu hlobo lwenkqubo lukwangoko, nangona kunjalo, ukuze kugqitywe onke amanyathelo, uvimba-mali jikelele kufuneka abe nenombolo yefowuni ehlaziyiweyo.
Ukongeza kwiminyaka yegalelo, kubalulekile ukwazi enye idatha
Indlela ebesikukhankanye ngayo ekuqaleni, ukongeza ekwazini inani leentsuku esithe sanegalelo ngazo, kubaluleke kakhulu ukuba sazi nenye idatha ukuze sikwazi ukufikelela kumhlalaphantsi wethu ngexesha eliqikelelweyo. Ezi datha azisebenzi kuphela ukuze sazi ukuba ngowuphi umhlala-phantsi esinawo, kodwa ukuze sazi xa kunokuthi kubekho intswela-ngqesho, sithini isixa-mali esiya kuba naso inyanga nenyanga.
Kwimeko apho nayiphi na idatha ingachanekanga, kufuneka ndenze ntoni?
Kwimeko apho uqaphele ukuba nayiphi na idatha ekwiphepha lokhuseleko loluntu ayichanekanga, inyathelo elilandelayo kukuguqula idatha evela kwiprofayile yakho. Nangona kunjalo, iya kuba lukhuseleko lwentlalo emva kokuba ubone ukulungiswa kwakho, uthatha isigqibo sokuba ingaba luhlobo oluchanekileyo lolwazi na.
Uyazi njani imihla ecatshulweyo ukucela izibonelelo
Ngokungafaniyo nomhlala phantsi, kuba ukwazi ukucela intswela-ngqesho kufuneka ziintsuku ezichaziweyo kwaye kufuneka ubuncinci iintsuku ezingama-360 ezicatshuliweyo.
Kwimeko apho ungakwazanga ukufikelela kule mali, into onokuyicela luncedo oluncinci "ukuphulukana nomsebenziKodwa kule meko, ukhuseleko lwasentlalweni alunyanzelekanga ukuba ikunike.
Kolu ncedo lwesibini, kufuneka ube negalelo ubuncinci kwiintsuku ezingama-90 ukuba unosapho oluxhomekeke kulo okanye iintsuku eziyi-180 xa ungenalo.
Ngaba ikhona imisebenzi engadweliswanga?
Ewe, kukho imisebenzi engadweliswanga kwaye ke ngoko akukho ncedo lunokufikelelwa. Le misebenzi ngabasebenzi basekhaya okanye abantu abaqeshiweyo, oko kukuthi, abaziqeshileyo. Nangona ukuba kukho ifayile ye- intswela-ngqesho kubantu abazimeleyo, Inemithetho ethile ekufuneka igqunywe ukuze kufikelelwe kuyo kwaye ibizwa ngokuba "Ukupheliswa kwegalelo lomsebenzi".
Ngoku, sifuna ukucacisa inqaku elibalulekileyo, iintsuku zegalelo zisetyenziselwa umhlala-phantsi kunye nezibonelelo, ke kubaluleke kakhulu ukuzazi zombini, nangona kunjalo, zinokusetyenziswa ngokuchaseneyo. Oko kukuthi, ngelixa iintsuku zinegalelo ukuba zichithwe xa kusetyenziselwa intlawulo okanye uhlobo oluthile lwenzuzo, iintsuku ezinegalelo kumhlala-phantsi zibalwa kwiminyaka kwaye azichithwa, oko kukuthi, ziyanyuka kubomi bakho bonke.
Kuzo zombini iimeko, kubaluleke kakhulu ukuba uyazi ukuba liliphi inani eliyiminyaka onalo.
Ukubaluleka kwengxelo yobomi emsebenzini
Abasebenzi abaninzi banezabo ukusebenza INGXELO ukuze bazi iintsuku esele bezicaphule. Ngokuqinisekileyo oku yeyona ndlela ilungileyo kwaye le siyicebisileyo phezulu; Nangona kunjalo, kuya kufuneka unayo yonke idatha ephepheni ukuze kwimeko apho kukho ukusilela kwidatha yakho, ungafaka ibango okanye utshintshe naluphi na uhlobo lolwazi kwingxelo yakho yobomi bomsebenzi. Yonke idatha oyifumana apha iyalinganiselwa kwaye kwiimeko ezininzi, idatha inokulahleka okanye iimali azilingani i-100%.
Ingxelo yengqesho kufuneka ihlale ithathwa ngendlela ebonakalisa ngokupheleleyo ukuze umntu ngamnye afumane uluvo olusondeleyo olungasoloko luhambelana ne-100%, kodwa luhlala lusondele kakhulu kwinto esifuna ukuyazi.
Nangona kunjalo, i ubalo lokwenyani lweentsuku ezidwelisiweyo, Kufuneka ihlale isenziwa kwinkonzo yoluntu ngesicelo senzuzo okanye inkxaso-mali kunye nayo yonke idatha yokwenene ephepheni ukuze ukwazi ukubala ngokwenyani nanini na.
Ndibufunda njani ubomi bam bomsebenzi ukuze ndizazi iintsuku ezicatshuliweyo
Nje ukuba ube nobomi obusebenzayo, kufuneka ube nakho ukutolika ngokuchanekileyo. Ingxelo yobomi bomsebenzi yahlulwe yangamacandelo aliqela apho kunokufunyanwa khona idatha yobuqu yomntu ngamnye kunye nenombolo yokhuseleko kwezentlalo (qiniseka ukuba ichanekile). Ungajonga ukuba yintoni i- Inani leentsuku ezicatshuliweyo kwindawo apho ithi "ibhalisiwe kwinkqubo yokhuseleko lwentlalo ngeentsuku" x ".
Apha ngezantsi kwale datha, uya kufumana onke amaxesha owanike wona phezulu naphantsi kwezokhuseleko lwentlalo, ngomhla ngamnye kunye namagama eenkampani.
Kwimeko apho uqaphela ukuba ulwazi alukho, ungacela ukulungiswa kwalo, kodwa kufuneka ube namaphepha abonisa ukuba usebenze ngenene kwindawo elahlekileyo ngokuthumela amaxwebhu askeniweyo, ukuze ukhuseleko lwentlalo lubandakanye.
Kwaye, ngaba uyazi ukuba mingaphi iminyaka ekufuneka unikele ngayo ukuqokelela ezona pension zisezantsi? Cofa apha:
Mingaphi iminyaka ekufuneka unikele ngayo ukuqokelela ezona pension zisezantsi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ezezimali » Uqoqosho ngokubanzi » Ngqesho » Ungazazi njani iintsuku ezinegalelo kukhuseleko lwentlalo?
UJose Vicente Pinilla sitsho
Kwixesha elifutshane elidlulileyo ndizamile ukufumana kwi-Intanethi iminyaka yam yokufaka igalelo kwi-SS (Ubomi Bomsebenzi) ngeSatifikethi sam seDigital kwaye andisifumenanga kwaye namhlanje kwincwadana yakho yamanqaku kunye nokunqakraza kwi-jiffy ku "ngenisa iqonga" "I sele unayo! Enkosi kakhulu uSusana.
Phendula kuJosé Vicente Pinilla
UTOMAS FERNANDEZ CARRETERO sitsho
Zingaphi iintsuku endikhe ndacaphula kuzo
Phendula TOMAS FERNANDEZ CARRETERO
Felix vasco jimenez sitsho
Ndifuna ukwazi ukuba mingaphi iminyaka endidwelisiweyo, igama lam ndingu felix vasco jimenez 75669356t
Phendula ku-felix vasco jimenez
Magdalena segarra ukuthengisa sitsho
Indlela yokubala kwaye yeyiphi imisebenzi ekufuneka ndiyenzile ukubala iintsuku zam zidwelisiwe (iiyure x 8 zahlulwe x ????) Unjani umsebenzi? Enkosi
Phendula kwiintengiso ze-magdalena segarra
UMaria Eugenia Laba sitsho
Molo, ngeentsuku eziyi-1055 zemirhumo, oko kukuthi, iminyaka emi-2, iinyanga ezili-10, kunye neentsuku ezingama-21, yimalini ipenshoni yam?
Phendula uMaría Eugenia Laba
Iingelosi zaseMari sitsho
Ndingathanda ukwazi endikucaphuliweyo kwaye yintoni endinokuyishiya ukusukela ndineminyaka eyi-58 kwaye kwiminyaka embalwa ndicaphule i-imeyile ukuphendula iimangeles.marquez@dkvintegralia.org imuchas Gracias
Phendula iingelosi zaseMari
Ukuxolelwa kwirhafu eSpain